एमाले र माओवादी केन्द्रको मिलापले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्याे । पहिले तँ त्यो पार्टीको, म यो पार्टीको भनेर झगडा गर्ने छिमेकी पार्टी एकीकरणका कुराले एक भए । यो हाम्रो समाजको सकारात्मक पक्ष हो ।
अर्थशास्त्रीहरू श्वेतपत्रको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रचुर बहुमत प्राप्त सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै श्वेतपत्र जारी गर्ने सन्देश दिएका खतिवडाले दुई महिनापछि घोषणा हुने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको संघारमा श्वेतपत्र जारी गर्नुको कारण स्पष्ट छैन ।
हामीले कुनै घटनाक्रम घट्दा लिइने दृढ संकल्प त्याग्ने हिम्मत गरौँ । यही विन्दुबाट परिवर्तनको रेखा कोरिनेछ ।
मोदीको हराउँदो चमक !
कहिले पनि जमानत जोगाउन नसकेको भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको भाजपाले क्षेत्रीय दलहरुसँग मिलेर यी स्थानमा आफ्नो वर्चस्व कायम राखेको छ तर उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा थोरै सिट रहेकाले ती क्षेत्रमा भाजपाको जीतले अर्को चरणको सत्तायात्रालाई सहज बनाउन कठिन नै हुनेछ ।
कांग्रेसमा रोइलो कि एकता ?
नेताहरू चुनावी समीक्षाको नाममा आगामी अधिवेशनका निम्ति मसलाहरू सृजना गरिरहेका छन् । मुख्य कुरा घर बलियो र प्रभावकारी भयो भने मात्र बाहिरी दुनियासँग भिड्न प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने हुन्छ । तसर्थ कांग्रेसका ‘जिम्मेवार नेता’ रामचन्द्र, सशांक, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमानहरू जो अहिलेको पराजयको मूल्यमा नेता बन्न जग हाल्न खोजिरहेका छन् ।
रञ्जु दर्शनाको उद्घोष ‘म खहरे हैन’
चुनावताका मलाई साउने भेल पनि नभनेका होइनन् तर म भेल हैन, नदी बन्न अडिग छु । मेरो कामले नदीको आकार लिँदैछ ।
भविष्यविज्ञ बन्ने कि अतितविज्ञ
व्यक्ति चुनौतीबाट डराउँछ उसले प्रगति गर्न सक्दैन । डरछेरुवाहरु असम्भवको भाषामा मात्रै संवाद गर्छन् । त्यसैगरी विजेताहरु सम्भावनाका कुरा गर्छन् । बुद्धिजीवी, सल्लाहकार र आलोचनात्मक सुझाव दिनेहरुले चुनौती लिनु विरलै सुझाउँछन् ।
प्रहरीको गिर्दो मनोबल
बलात्कार घटनाका दोषी उम्क्याउने र नेताहरूको आड भरोसामा रहेकालाई देखेको नदेखेजस्तै गर्ने प्रवृत्ति घातक हुनसक्छ । यस्ता प्रवृत्तिले प्रहरीको मनोबल गिराउने हुन्छ । मनोबल गिरेको प्रहरी ऐन मौकामा ‘बाँदरको पुच्छर लौरो र हतियार’ उखान चरितार्थ हुनसक्छ ।
मुस्कान हराएका देउवा
प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा सांसदहरु सपथ नै नलिई हतारहतार राष्ट्रपतिकै सक्रियतामा संसद्को पहिलो र तेस्रो दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दासमेत कांग्रेस नेताहरु डिलमा बसेर रमिते बने । विगतका आफ्ना कमजोरीले वर्तमानमा अरुले गरेका गल्ती औँल्याउने साहससमेत देखिएन ।